SR. Network မှ Analyst, ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / အိုင်တီ / SR. Network မှ Analyst, ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ
SR. Network မှ Analyst, ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ
စူပါအဒ်မင် ဧပြီလ 8, 2016 အိုင်တီ3မှတ်ချက်များ 803 views
ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာ – သတင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ်များကိုယောဘဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍ / တာဝန်နှင့်တာဝန်ယူမှုနမူနာ
SharePoint ဒီဇိုင်နာယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍ / တာဝန်နှင့်တာဝန်ယူမှုနမူနာ
systems Analyst, ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့်တာဝန်ယူမှုနမူနာ
လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် NETWORK Analyst
ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, ဒီဇိုင်းများ, နှင့်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကျယ်ပြန့်-ဧရိယာဒေတာ / တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်အတွက်ဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဒေသခံဧရိယာကွန်ရက်များအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော; Ethernet အပါအဝင်နည်းပညာဆိုင်ရာတာဝန်များကိုကိုင်တွယ်, TCP / IP, Gigabit Ethernet, SNMP, Novell Interfaces, LAN / WAN ဆက်သွယ်မှု, အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု, ကြိုးမဲ့နည်းပညာ, firewall က, HP က Openview, Packetshaper ကရိယာ, Network ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးပစ္စည်းများ, packet ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, ဗွီဒီယိုနှင့် Voice ကိုကျော်အိုင်ပီနည်းပညာများ.
ကွန်ယက်ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့်အတူကွန်ယက်ကိုဒီဇိုင်းများကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်သြဒိနိတ်; installs, Modify, နှင့်ကွန်ယက်ဆက်သွယ်ရေးဟာ့ဒ်ဝဲကို support; ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်ပြုပြင်လုပ်ဆောင်.
ဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်ကူညီပေးနေ, အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် supporting, အင်္ဂါရပ်တိုးမြှင့်မှုများ, ကြိုးများနှင့်ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များနှင့်အမှားထောက်လှမ်း / ဆုံးမခြင်းလုပျထုံးလုပျနညျး.
တက္ကသိုလ်ကျယ်ပြန့်တဲ့နည်းပညာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များသို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ input ကိုထောက်ပံ့.
အသိပညာ, မှု, အရည်အချင်းများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝိသေသလက္ခဏာများ
ကွန်ယက်ကိုထုတ်ကုန်များနှင့် utilities ၏အသိပညာ
ကွန်ယက်ကို protocol များ၏အသိပညာ (အိုင်ပီ, TCPIP, IPX, Netbus)
ကြိုးမဲ့ site ကိုစစ်တမ်းဖျော်ဖြေ၏အသိပညာ
ဒေတာကွန်ရက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏အသိပညာ: configuration များ, စမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်ပြုပြင်
Interpersonal / လူ့ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်မှု
အလုပ်-တိုးမြှင့် software ကိုသုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်, စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု tools များအသုံးပြုခြင်းများအပါအဝင်
ဟာ့ဒ်ဝဲ၏နေ့စွဲအသိပညာအထိ ,အထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီအသုံးပြုသောကြောင့်သက်ဆိုင်သော software နှင့်ပရိုဂရမ်းမင်း
လွန်ခဲ့သော Maid and Housekeeping Cleaner Job Description
SR စနစ်များအင်ဂျင်နီယာချုပ်ကယောဘဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍ / တာဝန်နှင့်တာဝန်ယူမှုနမူနာ
လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် / အခန်းကဏ္ဍ / တာဝန်နှင့်တာဝန်ယူမှုနမူနာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း applications များပေါ်တွင်အဆင့်မြင့်မေးမြန်းချက် Created …
ဧပြီလ 28, 2019 တွင် 8:41 နံနက်
Pingback: Are Free Data Entry Jobs Your Own Really Complimentary? | | မွေပွငျအောကျလမျး